မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဈေးသုံးဈေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိနေ ? - Yangon Media Group
မွန် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဈေးသုံးဈေးအား အဆင့်မြင့်တင်ရေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိသော လုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်ထား သော်လည်း တင်ဒါပိတ်ရက်အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူမပေါ်ပေါက်ပါက ဈေးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဦး မင်းကျော်လွင်ကပြောသည်။
”ဈေးသုံးဈေးအတွက် လျှောက်လွှာတွေအပ်သွားတဲ့သူ က ခုနစ်ဦးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပထမအကြိမ်မှာ လျှောက်လွှာတင်တဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက် လျှောက်လွှာပိတ် ရက်ကို နှစ်လထပ်တိုးပြီး နိုဝင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်ထားတယ်။ အခုအချိန်အထိ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ပြန်ပြီး လျှောက်လွှာမတင်ကြသေးဘူး။ သတ်မှတ်ရက်မှာတင်တဲ့သူမရှိရင် တော့ ဈေးအဆင့်မြင့်တင်စီမံကိန်း ကို ရပ်ဆိုင်းထားရမှာပဲ။ အစိုးရ အနေနဲ့လုပ်ဖို့ကျတော့လည်း အစိုးရမှာဘတ်ဂျက်မရှိလို့ပါ”ဟု ဦးမင်း ကျော်လွင်ကပြောသည်။
အဆိုပါဈေးသုံးဈေးမှာ သထုံ မြို့မှ နှစ်ဈေးပေါင်းတစ်ဈေးသတ်မှတ်သည့် မြို့မဈေးနှင့် သုဝဏ္ဏ ဈေး၊ မော်လမြိုင်မြို့မှ ထားဝယ် စုဈေးနှင့် မုဒုံမြို့မှ မြို့မဈေးတို့ ဖို့ဖြစ်ပြီး မော်လမြိုင်ထားဝယ်စု ဈေးမှာ အစိုးရဈေးဖြစ်၍ ကန့်ကွက်မှုမရှိ၊ မုဒုံမြို့မဈေးမှာလည်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိစ္စတွင် ဈေးသူဈေးသားများက လိုလားမှုရှိ၍ ကန့်ကွက်မှုမရှိသော်လည်း သထုံ မြို့ရှိ မြို့မဈေးနှင့် သုဝဏ္ဏဈေးတို့မှာ ဈေးသူဈေးသားများက ကန့်ကွက်မှုများရှိနေကြောင်း သိရသည်။
”ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဟာ ဈေးသုံး ဈေးလုံးကို တာဝန်ယူဆောက်လုပ် ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ်စိတ် ဝင်စားပြီး တည်ဆောက်နိုင်မယ့်ဈေး တစ်ခုကိုပဲဖြစ်ပါစေ အဆိုပြုလွှာ တင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အ နေနဲ့ Developer တွေပေါ်ထွက် လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးချင် တာလည်းပါပါတယ်”ဟု ဦးမင်း ကျော်လွင်ကပြောသည်။
'၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ရေကျော် သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်' စတင်ကျင်းပ ရာသီဥတု အခြေအနေ မကောင်းမွန်မှုေ?
တစ်နှစ် ပေါင် ၄၆ သန်းတန်သည့် စပွန်ဆာအတွက် ဗိငျိေ နှင့် ဂျူဗင်တပ် သဘောတူညီမှုရ